"Hove Inotanga Kuora Kumusoro" VaChamisa Voshora VaMnangagwa Vachiti Vatadza Kurwisa Huori
Kurume 20, 2022
Mutungamiri wenyika VaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change VaNelson Chamisa
Mutungamiriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change, VaNelson Chamisa, vachitaura munhandare yerujeko kuMasvingo vashoropodza mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa panyaya yekurwisa huori vachiti havasi kuita zvakakwana uye huori huri kutangira kumusoro soro.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti, "Corruption ndiyo yauraya nyika ino, Ini handina chinhu chemunhu chandakaba, tichipinda, munhu aba muhurumende anofanira kufira mujeri." Vaenderera mberi vachiti, "But kana uri baba ukaita basa rekunombora mukaka, woti vanamusanombora vanonombora nepawakanombora napo haufe wakavabata. Mnangagwa woye!, vanhu vanoziva kuti hove inotanga kuora musoro...mutungamiri ndiye anodeterminer the tone of the nation.'
Asi VaMngangagwa vanogara havo vachiti chinangwa chavo chikuru ndechekurwisa huori hwatekeshera munyika.
Bato reZanu-PF rinotiwo kusungwa kwevamwe vaive makurukota vakaita saVaSamuel Undege, Amai Prisca Mupfumira uye kudzingwa basa kwakaitsa VaObidiah Moyo vakaziochenurwa nematare, munongedezo wekuti vari kurwisa huori.
VaChamisa vavimbisa kupawo vakarwa hondo mari dzavo dzemudyandigere dzakafanira. vapomera hurumende pamwe nebato riri kutonga reZanu PF mhosva yekushandisa vaimbova varwi verusununguko kana dzave nguva dzesarudzo asi vasingakoshesi raramo yavo vachiti kana vakapinda panyanga vachagadzirisa hupenyu hwevarwi verusunguko kuti vagare zvakanaka.
VaChamisa vati hurumende inorangarira varwi verusunungo ruzhinji nguva dzesarudzo chete nekuti inenge ichida kuvashandisa kuti vatsvage rutsigiro kana sarudzo dzapera vovasiya vachinonga svosve nemuromo.
VaChamisa vashorawo chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuongorora zvekare kuti vaive varwi verusununguko, vanamujibha pamwe nanachimbwido ndivanani kuti ivabatsire vachiti chirongwa ichi hachisikuitwa murudo asi muchitsotsi nekuda kwesarudzo.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo rikapinda panyanga richaodzorera varwi verusununguko chiremera nekuvapawo hupenyu hwakanaka senzira yekuvatenda nebasa ravakaita rekurirwa rusununguko rweruzhinji.
VaChamisa vakurudzira vatsigiri vavo pamwe nevanhu munyika kuti vanyorese kuvhota vagozovhotera bato ravo zvine mutsindo pasarudzo dzegore rinouya pamwe chete nedzama by elections dziriko nemusi weMugovera.
Vati vanhu vakavhota vakawanda kubirira kwesarudzo kunonetsa nekudaro
vanhu vose vanofanira kuvhota pasarudzo kuti vachinje hurumende
iri kutungamirira nyika.
Vachitaurawo pamusangano uyu mumwe mutevedzeri waVaChamisa, VaTendai Biti, vati bato ravo rikapinda vachatambirirsa vashandi vehurumende nemadhora ekuAmerica.
Vaimbova nhengo yeZanu PF asi vave kubato reCCC , VaDzikami Mavhaire vakurudzira vanhu kuti vatsigire mukoma wechididiki.
VaChamisa vati bato ravo richashandisa sarudzo dzema by elections kuona kuti vane rutsugiro rwakdaii kuitira pasarudzo huru dzegore rinouya idzo dzinogona kuti paite hurumende itsva inotungamiriria vanhu veZimbabwe.
Zvichakadaro, musangano wange uchida kuitwa neZanu-PF kuMuchek Stadium unonzi hauna kuzoitwa ichiti kwange kuine bhora.
Mukuru mubazi rezvezvekuburitswa kwemashoko mubato iri VaTafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vakuru vebato vachiri kuzeya kuti vangakwanise here kuita mumwe musangano kuChitungwiza sarudzo dzisati dzaitwa.
Sachigaro webato reMDC Alliance VaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti parizvino havasi kuita misangano mikuru asi vari kukurudzira nhengo dzavo dziri kukwikwidza kuti dziende kudzimba dzevanhu dzichitaura navo.
Sarudzo dzemaby-elections dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzakawanda dzebato reMDC T mumakanzuru nemudare reparamende dzadzingwa dzichipomerwa mhosva yekutsigira VaChamisa. Zanu-PF yakadzingawo vamwe uye vamwe vakafa